April 2011 ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Norton Internet Security 2011 + [ 88 yr ] Crack
By နေမင်းမောင်6:34 PMAntivirus Softwares, Antivirus Tools, Audio Tools, Internet Tools1 comment
Click &amp;amp;lt;a href='http://www.cincopa.com/media-platform/view.aspx?fid=AwAAun6s3Arx'&amp;amp;gt;here&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt; to open the gallery.&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; Powered by Cincopa &amp;amp;lt;a href='http://www.cincopa.com/media-platform'&amp;amp;gt;Media Platform&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt; for your website and Cincopa MediaSend for &amp;amp;lt;a href='http://www.cincopa.com/mediasend/start.aspx'&amp;amp;gt;file transfer&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;
ကျွန်တော် Norton Internet Security 2011 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။88 year Crack လေးနဲ့ပါ.။ကျွန်တော်ကတော့ Norton ပ၇ိတ်သတ်ဗျ..။Norton ပဲကြိုက်တယ်။အခုတော့အကုန်ုသုံးဖြစ်ပါတယ်။၇က်ပေါင်း
32008 ၇က်သုံးလို့၇တယ်ဗျာ..။Antivirus တစ်ခုထဲကိုပဲသုံးချင်သူများအတွက်တော့ Windows နောက်ထပ်
တွေနဲ့၇ှင်းပြပေးထားပါတယ်။ ဒီလင့်လေး မှာသွားကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ..။သုံးချင်သူများအောက်ကလင့်လေးမှာ
Nokia ဖုန်းနှင့် မြန်မာစာစနစ်
By နေမင်းမောင်6:13 PMMobile Software9 comments
Facebook အတွက် Firefox Add-on အလန်းလေး
By နေမင်းမောင်8:05 PMTips And Tricks2 comments
ကျွန်တော် Facebook သုံးစွဲသူများအတွက်အသုံးဝင်တဲ့ Firefox Add-on လေးတွေ့ လို့ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါ
တယ်.။လူတိုင်းအကြိုက်တွေ့ မဲ့ Add-on လေးပါ။ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆို၇င် Facebook မှာမိမိတို့ကြည့်ချင်တဲ့
ပုံတွေကို Double Click ပေးပြီးကြည့်ကြပါလိမ့်မယ်။ဒီကောင်လေးကိုမိမိ၇ဲ့ Firefox မှာ Install လုပ်ထားလိုက်
၇င်အ၇မ်းအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။Facebook မှာကိုကြည့်ချင်တဲ့ပုံကိုသူ၇ဲ့ Profile ထဲလဲမသွားတော့ဘူး
ဗျာ..။ပုံလေးကိုတွေ့ တာနဲ့ပုံလေးပေါ်မှာမောက်လေးထောက်လိုက်၇င်ကိုကြည့်ချင်တဲ့ပုံကိုပုံကြီးချဲ့ပြီးတွေ့ ၇မှာ
Eset Nod32 Antivirus 4.0 ( 64-Bit ) and ( 32-bit ) + Working Key
By နေမင်းမောင်3:30 PMAntivirus Softwares, Antivirus Tools, Audio Tools, Internet ToolsNo comments
လို့၇အောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.။Username နဲ့ Password တွေအကုန်လုံးအလုပ်လုပ်ပါတယ်.။ကျွန်တော်
Working Keys တွေပဲေ၇ွးပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဆင်သင့်သုံးလို့၇အောင်အပင်ပန်းခံပြီးေ၇ွးတင်ပေးထား
တာပါ။သုံးချင်တဲ့သူများအောက်ကလင့်လေးမှာဒေါင်းလော့ချလိုက်ပါ.။ကျွန်တော် ziddu ကနေပြီးတင်ပေးထား
ပါတယ်.။ဒေါင်းလော့မချတက်သူများကျွန်တော်ဒေါင်းလော့လုပ်နည်း E-Book လေးတင်ပေးထားပါတယ်။ဖတ်
ကြည့်လိုက်ပါ။နောက်ပိုင်းကျွန်တော် Mediafire နဲ့ ziddu ကနေပဲတင်ပေးသွားပါမယ်။တကယ်လို့ဒေါင်းလော့
ချ၇တာအဆင်မပြေ၇င်ပြောပေးပါ.။ကျွန်တော်အဆင်ပြေမဲ့ Hosting ကနေပြောင်းပြီးတင်ပေးပါမယ်.။
ကျွန်တော် 64 Bit နဲ့ 32 Bit ကိုခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ်။ကိုသုံးတဲ့ Windows နဲ့ေ၇ွးပြီးဒေါင်းလော့ချလိုက်ပါ.။
Uniblue RegistryBooster 2011 + serial
By နေမင်းမောင်8:46 PMSystem Tools2 comments
ကျွန်တော်အသုံးဝင်တာလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။System error တွေကိုစစ်ပေးတဲ့ Software
လေးပါ။Registry ထဲမှာ၇ှိတဲ့ System error တွေကိုဒီဆော့ဝဲလ်လေးသုံးပြီးတော့ဖြေး၇ှုင်းနိုင်ပါတယ်.။မိမိတို့
ခါလောက်စစ်ပေးသင့််ပါတယ်.။ကျွန်တော့်စက်မှာတင်စစချင်းစစ်လိုက်တာ error 400 ကျော်လောက်တွေ့ 
ကျွန်တော် Key ထည့်နည်းလေးကိုတော့ပြောပြပေးပါမယ်..။
By နေမင်းမောင်5:08 PMKnowledge and FAQ4 comments
သုံးဖူးတဲ့သူတွေလဲ၇ှိမှာပါ..။ကိုယ့်၇ဲ့ပုံလေးတွေကို Effect လေးတွေအမျိုးမျိုးထည့်ပြီးသုံးလို့၇တဲ့ဆိုဒ်လေးပါ။အ
ကြိုက်တွေ့ မယ့်ဆိုဒ်လေးပါ။ပြီး၇င်ပုံလေးတွေကိုပြန်ပြီးသိမ်းထားလို့၇အောင် JPG လေးနဲ့လဲပြန်ထုတ်ပေးပါ
တယ်။အ၇င်က Facebook မှာတော့အခုလို Effect သုံးထားတဲ့ပုံလေးတွေတွေ့ ဘူးပါတယ်.။Effect လေးတွေ
By နေမင်းမောင်10:47 PMAntivirus Softwares, Antivirus Tools, Audio Tools, Internet ToolsNo comments
Click &amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href='http://www.cincopa.com/media-platform/view.aspx?fid=AsKAFlKItwUm'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;here&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; to open the gallery.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; Powered by Cincopa &amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href='http://www.cincopa.com/media-platform'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Media Platform&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; for your website and Cincopa MediaSend for &amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href='http://www.cincopa.com/mediasend/start.aspx'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;file transfer&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;
ပစ်ထားတာ တစ်ပါတ်လောက်၇ှိပြီ..။အ၇င်၇ှိပြီးသား Antivirus ကိုဖြုတ်ပြီးပြန်တင်မယ်တင်မယ်နဲ့ဒီတိုင်းထား
လိုက်တာဒီနေ့တော့ Antivirus လေးတော့ပြန်တင်ထားလိုက်ပါအုံးမှ ဆိုပြီးလိုက်၇ှာလိုက်တာဒီကောင်လေး
By နေမင်းမောင်1:56 AMGoogle Fun1 comment
G-mail သုံးစွဲသူတွေအတွက် G-mail အကောင့်တွေ Lock ကျသွားတာတွေကြုံဖူးမှာပါ။အကောင့်ကိုဝင်လိုက်
၇င် username နဲ့ password လဲမှန်တယ်အကောင့်က၀င်လို့မ၇ပဲ စာလုံးလေးတွေ၇ိုက်ပြီးဝင်ခိုင်းတယ်။၀င်
အကောင့်ကလော့ကျနေတယ်ဆို၇င်အောက်မှာပေးထားတဲ့လင့်လေးကိုသွားပါ။ပြီး၇င် Username နဲ့
Password ၇ိုက်ထည့်ပါ။ပြီး၇င်ပေးထားတဲ့စာလုံးလေးတွေကိုမှန်အောင်၇ိုက်ထည့်ပေးပါ။ပြီး၇င် unlock ကို
နှိပ်လိုက်ယုံပါပဲ။လော့ကျနေတဲ့ G-mail အကောင့်လေးပြန်ပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်.။
By နေမင်းမောင်1:21 AMDesktop FunNo comments
ကျွန်တော် Windows7Themes လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။SnowLeopardTheme ပါ။ဒီကောင်လေးကို
များအတွက်ပါ။ဒီကောင်လေးက Windows တစ်ခုလုံးကိုပါပြောင်းပေးတာပါ။Windowsအသစ်တစ်ခုပြောင်း
သုံးတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။သူ၇ဲ့ပုံစံလေးကတော့အပေါ်ကပုံလေးအတိုင်းပါပဲ။ကြိုက်တဲ့သူများသုံးကြည့်ပေါ့ဗျာ.။Windows ထပ်တင်စ၇ာမလိုပဲနဲ့နောက်ထပ် Windows ပုံစံတစ်မျိုးထပ်ပြီးသုံး၇တာနော်..။ကျွန်တော်သုံးကြည့်ပြီးမှတင်
ပေးလိုက်တာပါ။ကွန်ပျူတာကိုအမြဲတမ်းဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ့ဆန်းသစ်နေချင်သူတွေတော့အကြိုက်တွေ့ ပါလိမ့်မယ်။ သုံးချင်သူများအောက်ကလင့်လေးမှာသာဒေါင်းလော့ချလိုက်ပါဗျာ..။
Download လုပ်နည်းများ ( Megaupload,Fileserve,ifile,Ziddu,Zshare )
By နေမင်းမောင်7:39 PME-Book2 comments
ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကိုကောင်လေးငယ်ေ၇းသားထားတဲ့ Download လုပ်နည်းများ E-book လေးတင်ပေး
Windows_7_Manager_v1.1.5 + Keygen
By နေမင်းမောင်12:32 AMSystem Tools1 comment
ကျွန်တော် Windows7Manager လေးကို Keygen လေးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။Windows7users များအ
တွက်ဒီကောင်လေးကိုစက်မှာ Run ထားလိုက်ယုံနဲ့အခြား Tune-up , CC Cleaner တို့ကိုထပ်ပြီးတင်စ၇ာမလို
တော့ပါဘူး။တော်တော်လေးလဲကောင်းပါတယ်။ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဆို၇င်တောင်မှတနေ့တခါလောက် 1 Click
လေးပဲသုံးတယ်။သုံးကြည့်၇င်သိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော် 64 Bits နဲ့ 84 Bits နှစ်ခုခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ်။ကို
တင်ထားတဲ့ Windows နဲ့အဆင်ပြေတာသာအောက်မှာဒေါင်းလော့ချလိုက်ပါဗျာ..။ညွန်းတာမဟုတ်ဘူးနော်သုံး
Blog မှာဘာကုဒ်မှထည့်စ၇ာမလိုပဲ Readmore လေးထည့်ကြည့်၇အောင်
By နေမင်းမောင်8:47 PMဘလော့10 comments
ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ Blog မိတ်ဆွေများအတွက်အလွယ်ကူဆုံးပို့ခေါက်နည်းလေးကိုပြောပြပါမယ်.။ကျွန်တော်
တို့အများစုက Blogspot ကပေးထာတဲ့ Readmore Function ကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာမသိကြဘူးဖြစ်
နေတယ်ဗျာ..။သိတဲ့သူတွေလဲ၇ှိမှာပါမသိသေးတဲ့သူများအတွက်ဘာကုဒ်မှမသုံးပဲ Readmore ထည့်လို့၇တဲ့
1.အ၇င်ဆုံးမိမိဘလော့ကိုဝင်လိုက်ပါ..။ပြီး၇င် Design Tab ကိုသွားပါ။ပြီး၇င် Page Elements ကိုသွားပါ။
Blog posts မှာ Edit ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
By နေမင်းမောင်3:23 AMGoogle Fun1 comment
ကျွန်တော် G-talk အကောင့်လေးတစ်ခုပေးပါမယ်.။အဲ့ဒီအကောင့်လေးကကြူလို့တော့မ၇ဘူးဗျာ...။သိချင်
တာလေးတွေ၇ှိ၇င်တော့သူကဖြေပေးပါတယ်.။ webtoim@gmail.com ပါဒီအကောင့်လေးကိုအပ်ထားလိုက်
လိုတော့မေးလို့မ၇ပါဘူး။What time in myanmar?လို့မေး၇င်သူက April 24th 2011, 02:05:26 MMT ဆို
ပြီးဖြေပေးပါလိမ့်မယ်။Angelina Jolie လို့၇ိုက်မေးလိုက်၇င်Our AnswerAngelina Jolie
(born Angelina Jolie Voight on June 4, 1975)the American actress and Goodwill Ambassador for the UN Refugee Agency ဆိုပြီးဖြေပေးပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်မေးတဲ့မေးခွန်တွေမှန်နေသေ၇ွ့ တော့သူကပြန်
ဖြေပေးနေမှာပါ။အကောင့်အပ်ထားချင်သူများ webtoim@gmail.com ကိုအပ်လိုက်ပါခင်ဗျာ...။
G-talk Picture လေးကို Slideshow လေးနဲ့ထား၇အောင်
By နေမင်းမောင်2:33 AMGoogle Fun1 comment
ကျွန်တော် G-talk သုံးစွဲသူများအတွက်မိမိတို့၇ဲ့ G-talk မှာတင်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကို SlideShow လေးနဲ့ထား
ချင်သူများအတွက် G-talk Shell လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ G-talk Picture လေးတွေ
ကိုတစ်ပုံပြီးတစ်ပုံ Slidwshow လေးနဲ့ပြပေးနေမှာပါ။ပြီး၇င်ကျွန်တော်ဆီမှာ၇ှိတဲ့ G-talk ပုံလေးတွေပါလိုတဲ့
သူများသုံးလို့၇အောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုခံစားချက်လေးတွေကို G-talk မှာပုံလေးတွေနဲ့ဖော်ပြချင်တဲ့
သူတွေအတွက်တော့အသုံးဝင်မှာပါ။ အ၇မ်းလွမ်းနေပြီတို့ ၊ လွမ်းလို့တို့ ၊ စိတ်မဆိုးပါနဲ့တို့ ပုံလေးတွေကတော့
1.အ၇င်ဆုံး G-talk Shell လေးကို Run လိုက်ပါ။ပြီး၇င် Shell ကိုနှိပ်ပြီး option ကိုသွားလိုက်ပါ။
By နေမင်းမောင်10:03 PMဘလော့1 comment
ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ Blog မိတ်ဆွေများအတွက် Blogspot မှပေးထားတဲ့ Template ကိုမသုံးချင်တော့လို့
ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် Template လေးနဲ့ပြောင်းသုံးမယ်ဆို၇င်ဘယ်လိုလုပ်၇မယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြ
ပေးပါမယ်။ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ေ၇ွးလို့၇အောင် Template ဆိုဒ်လေးတွေပါကျွန်တော်၇ှာပြီးတင်ပေးလိုက်ပါ
1.အ၇င်ဆုံးမိမိတို့စိတ်ကြိုက် Template လေးကိုေ၇ွးလိုက်ပါ။ပြီး၇င်ဒေါင်းလော့ချလိုက်ပါ။
2.မိမိ၇ဲ့ဘလော့ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ပြီး၇င် Design Tab ကိုသွားပါ။ Edit HTML ကိုသွားပါ။ပြီး၇င် Browser ကနေ
အသစ်ချိန်းမဲ့ Template လေးကိုယူလိုက်ပါ။တကယ်လို့အ၇င်သုံးခဲ့ပြီးသား Template ကိုပြန်ပြီးသုံးချင်
သေးတယ်ဆို၇င် Download Full Template ကိုနှိပ်ပြီး Download ချထားလိုက်ပါ။
By နေမင်းမောင်8:53 PMKnowledge and FAQ, Tips And Tricks2 comments
ကျွန်တော်တို့မိမိတို့သိမ်းထားချင်တဲ့အချက်လက်တွေကို Folder လေးတစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးလော့လဲမချဘူးဗျာ..
1.အ၇င်ဆုံး Windows + R ကိုနှိပ်ပြီး Run Box ထဲမှာ cmd လို့၇ိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
2.Administrator Box လေးကျလာပါလ်ိမ့်မယ်။အ၇င်ဆုံး cd\_ လို့၇ိုက်ထည့်ပါ။ပြီး၇င် Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
3.C:\_ ၇ဲ့နောက်မှာမိမိဖျောက်ချင်တဲ့ Folder လေးကိုထားတဲ့Device Name လေးကိုေ၇းပေး၇ပါမယ်။D ထဲမှာထား
၇င် D: , E ထဲမှာထား၇င် E: လို့၇ိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
Internet Download Manager 6.05 build 12 + Keygen
By နေမင်းမောင်4:54 PMInternet Download ManagerNo comments
Click &lt;a href='http://www.cincopa.com/media-platform/view.aspx?fid=AELApkKgrBZr'&gt;here&lt;/a&gt; to open the gallery.&lt;br&gt;&lt;br /&gt; Powered by Cincopa &lt;a href='http://www.cincopa.com/media-platform'&gt;Media Platform&lt;/a&gt; for your website and Cincopa MediaSend for &lt;a href='http://www.cincopa.com/mediasend/start.aspx'&gt;file transfer&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;
Internet Download Manager နောက်ထပ် Update အသစ်ထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။မနက်က
IDM Update လာတောင်းလို့ကြည့်လိုက်တော့ Build 12 ဆိုပြီးထပ်ထွက်လာတာတွေ့ လို့ Update ကိုမှ
သုံးချင်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Serials Key လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်။IDM
လေးကိုဘယ်လို INSTALL လုပ်၇မယ်ဆိုတာမသိသေးသူများဒီလင့်လေးမှာသွားကြည့်လိုက်ပါနော်..။ဘာ
ဘလော့မှာ Counter Widgets လေးတွေထည့်ချင်သူများအတွက်
By နေမင်းမောင်6:24 AMဘလော့4 comments
ချင်းများဘယ်လောက်၇ှိပြီလဲ၊ ဘယ်နိုင်ငံကလာတာလဲဆိုတာကိုသိဖို့ ၊ပြီး၇င်မိမိဘလော့လေးကိုလဲအလှဆင်
ချင်သူများအတွက် Counter Widgets လေးတွေအသုံးပြုလို့၇မဲ့ဆိုဒ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါ
ဒါကတော့ Flag Counter ဆိုဒ်လေးပါ။Get Your Own Free Flag Counter ဆိုလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားလိုက်
ပါ။Choose your own options and appearance မှာမိမိစိတ်ကြိုက်ပုံစံလေးကိုပြင်လို့၇ပါတယ်။ပြီး၇င်
Get Your Flag Counter ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီး၇င် Code for websites: မှာကုဒ်လေးကိုယူပြီးမိမိဘလော့မှာ
XP 2011 Securirty virus လေးကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲ
By နေမင်းမောင်3:15 AMAntivirus Softwares, Antivirus Tools, Audio Tools, Internet Tools1 comment
ကျွန်တော်စီဘောက်မှာမလ၇ိပ်အိမ်မေးထားတဲ့ XP 2011 Securirty virus ဖြေ၇ှုင်းနည်းလေးကိုပိုဒ်တစ်ခုအနေ
ကိုRemoval လုပ်ဖို့ XoftSpySE Anti-Spyware လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီကောင်လေးကိုဘယ်လိုအ
တွေက Spy-ware လေးတွေပါ။Rogue Security Application Virus အမျိုးအစားထဲမှာပါပါတယ်။ကျွန်တော်
တို့ကွန်ပျူတာမှာမှားယွင်းတဲ့ Scan report တွေ၊သုံးစွဲသူတွေကိုစိတ်အနှောင့်ယှက်ဖြစ်စေမဲ့နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ဒု
က္ခပေးတက်ပါတယ်.။ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဘယ်လိုနည်းလမ်းမျိုးနဲ့ Removal လုပ်နိုင်မလဲဆိုပြီးလိုက်၇ှာ
ပါတယ်.။၇ှိတဲ့ဆော့ဝဲတွေကလဲ Free မ၇ပါဘူး။ကျွန်တော် XoftSpySE Anti-Spyware လေးကိုတော့ Full
1.အ၇င်ဆုံး XoftSpySE Anti-Spyware လေးကိုမိမိ၇ဲ့စက်မှာ Install လုပ်လိုက်ပါ။အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်
ဘလောပို့ဒ်တွေအတွက် Labels လေးတွေတပ်ကြည့်၇အောင်
By နေမင်းမောင်4:08 AMဘလော့3 comments
ကျွန်တော် C-Box ထဲမှာကို၇ဲလေးမေးထားတဲ့ " blog page မှာခွဲထားတဲ့ပိတ် တစ်ခု ခြင်းဆီမှာ post တခုဆီ ဘယ်လို တင်ရမလဲ? " ဆိုတာကိုပို့ဒ်လေးတစ်ခုအနေနဲ့၇ှင်းပြပေးသွားပါမယ်။သိပြီးသားသူတွေလဲ၇ှိမှာပါ။မသိ
သေးတဲ့လူတွေအတွက်၇ည်၇ွယ်ပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းလေးကကျွန်တော်တို့တင်ချင်တဲ့ပိုဒ့်ကို Labels လေးတွေ
တပ်ပေးတဲ့သဘောပါ။ကျွန်တော်က ကဗျာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပိုဒ့်တွေအကုန်လုံးကိုကဗျာဆိုပြီး Labels တပ်ပေးထားမယ် ဆို၇င် Labels မှာကဗျာဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ယုံနဲ့ Page မှာကဗျာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပို့ဒ်တွေအကုန်လုံးပေါ်လာပါလိမ့်
မယ်။ကဲဒီလို Lable လေးတွေကိုဘယ်လိုတပ်မလဲ..။လွယ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘလော့မှာပို့ဒ်လေးတွေတင်
တဲ့အခါအောက်မှာ Labels ဆိုတဲ့အကွက်လေးကိုတွေ့ ၇ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအကွက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ပေးချင်
တဲ့အမည်လေးကိုပေးလိုက်ပါ။ဥပမာ - ကဗျာနဲ့ဆိုင်၇င်ကဗျာ , နည်းပညာနဲ့ဆိုင်၇င်နည်းပညာပေါ့ဗျာ..။တ
တယ်ကလို့နောက်ထပ်ကဗျာနဲ့ဆိုင်တဲ့ ပိုဒ်လေးတွေထပ်တင်မယ်ဆို၇င် Labels မှာကဗျာလို့ပဲထပ်ပြီးတပ်ပါ။
ဒါဆို၇င် Labels မှာကဗျာလို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘလော့ Page မှာကဗျာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပို့ဒ်တွေအကုန်ကျလာပါလိမ့်
Xilisoft HD Video Converter 6.5.1.0120 - Portable [Pre Licensed]
By နေမင်းမောင်3:23 AMMultiMedia2 comments
ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ Video Converter Portable လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။Portable လေးဆိုတော့သုံး၇
တာလဲအဆင်ပြေပါတယ်။ဒီ Portable လေးက Function တော်တော်များများကို Convert လုပ်ပေးတာလဲ
တွေ့ ၇ပါတယ်။MP-3 , MP-4 , SWF ဖိုင်တွေသာမကပဲ ipod , iphone , ipad , Blackberry , Mobile Phone စတဲ့ Function တော်တော်များများကိုလည်း Convert လုပ်ပေးတာတွေ့ ၇ပါတယ်.။သီချင်း File
လေးတွေကိုမိမိတို့လိုချင်တဲ့ဖိုင်ဆိုဒ်ကိုအလွယ်တကူ Convert လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သုံး၇တာအ၇မ်း
ကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ipod , iphone , Mobile Phone တွေအတွက်ပါမိမိတို့ထည့်ချင်တဲ့သီချင်းလေးတွေ
ကိုအလွယ်တကူ Convert လုပ်ပြီးထည့်ယုံပါပဲ။အသုံးပြုပုံအသုံးပြုနည်းကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြော
ဘလော့မှာ Zawgyi-One နဲ့ Unicode ကိုအလွယ်တကူပြောင်းချင်၇င်
By နေမင်းမောင်10:53 PMဘလော့11 comments
ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့မေးလ်ထဲကနေကိုနေဝေးမေးထားတဲ့ဘလော့မှာ ဇော်ဂျီ၊ ယူနီကုတ် ကွန်ဗက်တာလေး
တဲ့စက်တွေမှာဖြစ်စေအခက်အခဲမ၇ှိနိုင်တော့ပါဘူး။ဇော်ဂျီဖောင့်သုံးတဲ့စက်ဆို၇င် Zawgyi-One ဆိုတာလေး
ကိုပြောင်းပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်။ယူနီကုဒ်သုံးတဲ့စက်ဆို၇င်တော့ Unicode ဆိုတာကိုပြောင်းပြီးသုံးယုံပါပဲ။စာဖတ်
By နေမင်းမောင်2:44 AMHarddisk Repair and Maintain, Internet Tools1 comment
ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ၇ဲ့ System ပုံး ( သို့ ) ပုံးနံ၇ံမှာတပ်ထားတဲ့စပီကာသေးသေးလေးကနေထွက်တဲ့ဘိသံ
လေးတွေကိုနားထောင်ပြီး Hardware ပိုင်းကဘယ်ပစ္စည်းတွေပျက်တယ်ဆိုတာကိုစစ်ဆေးကြည့်၇အောင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ၇ဲ့ Hardware ပိုင်းမှာပြဿနာတစ်စုံတစ်၇ာ၇ှိ၇င် ( ဘိ ) သံလေးတွေလွတ်ပြီးအချက်
1. ( တိ ) အသံတစ်ချက်ပေးပြီး Windows တက်လာပြီဆို၇င်တော့မိမိ၇ဲ့ကွန်ပျူတာအခြေအနေကောင်းပါ
2. ( တိ ) အသံလုံးဝမထွက်ဘူးဆို၇င်တော့ Hardware ပိုင်းကတစ်ခုခုလွတ်နေပါပြီ။( သို့မဟုတ် ) Power
3. ( တိ ) အသံတချက်ခြင်းအဆက်မပြတ်ထွက်နေပြီဆို၇င်တော့ Graphic card ( သို့်မဟုတ် ) Memory
4. ( တိ ) အသံအဆက်မပြတ်ထွက်နေပြီဆို၇င်တော့ Motherboad ကဖြစ်နေတာပါ။
5. ( တိ ) အသံတော့လုံးဝမထွက်ဘူး။Processor Funs နဲ့ Power Supply ကတော့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆို
၇င်တော့ Motherboad ပျက်နေတာပါ။
ဘိသံများနဲ့ပါတ်သတ်ပြီးသိချင်သေးတယ်ဆို၇င်တော့ Google Search မှာ ( BIOS Beep Code ) လို့၇ိုက်
ထည့်ပြီး၇ှာကြည့်လိုက်ပါ။ပေါ်လာသော Website Links များမှေ၇ွးချယ်ပြီးဖတ်နိုင်ပါတယ်။ပိုပြီးပြည့်ပြည့်စုံ
By နေမင်းမောင်2:07 AMKnowledge and FAQ, Tips And Tricks1 comment
တယ်။အဲ့ဒီကုဒ်လေးကိုကျွန်တော်သုံးနေတာတော့ကြာပါပြီ။ဟိုနေ့ကမှ Unicode နဲ့ေ၇းထားတဲ့ဆိုဒ်တစ်ခု
1.အ၇င်ဆုံး Browser ၇ဲ့ Bookmark Toolbar လေးကိုဖွင့်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။Firefox ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ပြီး၇င်
View >> Toolbar ကိုသွားပြီး Bookmark ကိုအမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆို၇င် Firefox မှာ Bookmark Toolbar
Portable Windows တစ်ခုဖန်တီးကြည့်ရအောင်
By နေမင်းမောင်10:15 PMPortables1 comment
အချိန်၇၇င်၇သလိုေ၇းချင်ပါတယ်ဗျာ..။ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကိုမင်းသုခမေးထားတဲ့ Portable Windows
ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာကိုပို့ဒ်လေးတစ်ခုအနေနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။မိမိတို့အသုံးပြုနေတဲ့ Windows နှင့်
Compitable မဖြစ်တဲ့ Application တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်၇ာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Portable
Windows လေးသုံးပြီးဖြေ၇ှင်းနိုင်မှာပါဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် Portable Windows ဘယ်လိုပြုလုပ်၇မယ်ဆို
တာကိုတော့ PDF File လေးပြုလုပ်ပြီးတင်ပေးထားပါတယ်။အသုံးပြုဖို့လိုအပ်တဲ့ Portable Virutal Box နဲ့
VirtualBox-3.2.8-64453 (75.5 Mb) ကိုတော့အောက်ကလင့်လေးတွေမှာဒေါင်းလော့ချလိုက်ပါခင်ဗျာ..။
ဘယ်လိုအသုံးပြု၇မယ်ဆိုတာကိုတော့ PDF File လေးနဲ့အသေးစိတ်၇ှုင်းပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ...။
By နေမင်းမောင်4:22 PME-Book2 comments
1. အင်တာနက်သုံးစွဲသူများအတွက်အသိပေးချက် ( ၈ ) ချက်
2. နေ့စဉ်သုံးအင်တာနက် ( မျိုးသူ၇ )
3. အဆင့်မြင့်အင်တာနက်အသုံးပြုနည်း ( မျိုးသူ၇ )
4. အင်တာနက်နှင့်အီးမေးလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနည်း ( သူ၇အောင် )
By နေမင်းမောင်3:59 AMKnowledge and FAQ, Tips And Tricks2 comments
ခင်ဗျာ..။ Windows7အသုံပြုသူများအတွက်သာ……
1.ကျွန်တော်တို့ Windows စတက်တက်ချင်းမှာမလိုအပ်တဲ့ Program တွေတက်တက်လာတာတွေကိုကြုံဖူးကြ
မှာပါ။ဒီလိုမျိုးမလိုအပ်တဲ့ Programs ကို Windows အတက်မှာပေးထားခြင်းအားဖြင့် Windows ၇ဲ့ Loading
Time ကိုလဲကြာစေပါတယ်.။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မလိုတဲ့ Program လေးတွေကိုဖြုတ်ထားချင်တယ်ဆို၇င်
တော့ Windows + R ကိုနှိပ်ပါ။ပြီး၇င် Run Box ထဲမှာ msconfig လို့၇ိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
System Configuration Box လေးကျလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာ General , Boot , Services , Startup
Tools ဆိုပြီးတွေ့ ၇ပါလိမ့်မယ်။ Startup ကိုသွားပါ။ပြီး၇င်ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချင်တဲ့ Software တွေကိုအမှန်
ခြစ်ဖြုတ်လိုက်ယုံပါပဲ။ဥပမာ.. ..။ကျွန်တော်က G-talk ကို Windows တက်လာလာချင်းမှာမပေါ်စေချင်ဘူး
ဆို၇င် G-talk ဆိုတာလေးကို၇ှာပြီးအမှန်ခြစ်ဖြုတ်လိုက်ယုံပါပဲ။ပြီး၇င် Apply >> OK ကိုနှိပ်လိုက်ယုံပါပဲ
Ctrl + Alt + Esc လို့နှိပ်လိုက်၇င်လဲ System Configuration Box လေးတန်းကျလာပါလိမ့်မယ်.။
သုံးပြီးသားဖိုင်တွေကို Auto ဖျုက်ချင်တယ်ဆို၇င်
By နေမင်းမောင်4:07 AMKnowledge and FAQ, Tips And TricksNo comments
ကျွန်တော်အခုပြောမဲ့နည်းလမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ကွန်ပျူတာမှာမိမိတို့သုံးစွဲပြီးကျန်ခဲ့တဲ့ History Files တွေကိုတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီး၇ှင်းနေစ၇ာမလိုပဲ....ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ယုံနဲ့ပဲ History File အကုန်လုံးကို၇ှင်းလင်းသွားစေမဲ့နည်းလမ်းလေးပါ။Auto Clear လုပ်ပေးတဲ့သဘောပါ။နည်းလမ်းလေးက
1.အ၇င်ဆုံးကျွန်တော်အောက်မှာပေးထားတဲ့ကုဒ်တွေကို Copy ကူးလိုက်ပါ။ပြီး၇င် Notepad ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
ပြီး၇င်ကျွန်တော်တို့စောစောက Copy ကူးထားတဲ့ကုဒ်တွေကို Paste ပြန်လုပ်လိုက်ပါ။ပြီး၇င် Notepad ကို
naymin.reg နဲ့ Save လိုက်ပါ။ naymin နေ၇ာမှာကြိုက်တဲ့နာမည်ထည့်ပါ၇ပါတယ်.။
2.ဒါဆို၇င်ကျွန်တော်တို့က Destop ပေါ်မှာ Save ထားတယ်ဆို၇င် Destop ပေါ်မှာစောစောကပေးလိုက်တဲ့
နာမည်နဲ့ Registry ဖိုင်လေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်.။အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကလစ်နှိပ်လိုက်ယုံပါပဲ။
အောက်ကကုဒ်လေးကို Copy ကူးပါ။
Marine Engineering စာအုပ်တွေပါ
By နေမင်းမောင်4:44 PME-Book1 comment
အ၇င်တစ်ခါကတင်ပေးဘူးပါတယ်ဒါပေမယ့်လင့်တွေသေနေလို့..အခုကျွန်တော် Mediafire ကနေပြန်တင်ပေး
Control panel လေးကို Destop ပေါ်မှာပဲအလွယ်လေးထားကြည့်၇အောင်
By နေမင်းမောင်12:25 PMKnowledge and FAQ, Tips And Tricks1 comment
ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Srart >> Control Panel ဆိုပြီးသွားနေ၇တဲ့ Adjust your computer's setting
ကို Folder လေးကျွန်တော်တို့ Destop ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ တခြား Disk တစ်ခုခုထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထည့်ထားလို့၇
တဲ့နည်းလမ်းလေးပါ။ဒီကောင်ထဲမှာပါတဲ့ Setting လေးတွေက Control Panel ထက်ပိုပြီးစုံပါတယ်။ကျွန်တော်
တို့ Adjust your computer's setting မှာ 49 မျိုးပဲပါဝင်ပေမယ့်အခုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မဲ့ All Setting ထဲ
မှာတော့ ၂၈၄ မျိုးပါဝင်တာကိုတွေ့ ၇ပါလိမ့်မယ်။ကဲမိမိတို့ Destop ပေါ်မှာ Setting လေးကိုထားပြီးအလွယ်
်1.အ၇င်ဆုံး Destop ပေါ်မှာ Right Click ထောက်လိုက်ပါ။ပြီး၇င် New ထဲကနေ Folder ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး
New Folder တစ်ခုဆောက်လိုက်ပါ။
2.ပြီး၇င်အဲ့ဒီ New Folder လေးကို Right Click ပေးလိုက်ပြီး Rename ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီး၇င်ကျွန်တော်
အောက်ကပေးထားတာလေးကိုကူးပြီး Rename မှာထည့်လိုက်ပါ.။
3.ဖိုဒါ Name ကိုတော့မိမိတို့ကြိုက်တာပေးလို့်၇ပါတယ်။ကျွန်တော်က naymin လို့ပေးထားပါတယ်။naymin
နေ၇ာမှာမိမိတို့ကြိုက်တဲ့နာမည်ကိုပေးလိုက်ပေါ့ဗျာ..။ပြီး၇င် Enter ခေါက်လိုက်ပေါ့ဗျာ..။ဒါဆို၇င်၇ပါပြီ။
မသိသေးသူများအတွက် Folder Name ပေးချင်တယ်ဆို၇င်လဲအခုနည်းလမ်းလေးအတိုင်းလုပ်လိုက်ယုံပါ
By နေမင်းမောင်4:36 AMKnowledge and FAQNo comments
By နေမင်းမောင်3:11 AMPortables2 comments
Team Viewer ဆို၇င်တော့သုံးဖူးတဲ့သူတိုင်းသိကြမှာပါ။အခုကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တာကတော့ Portable
လေးဆိုတော့ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပါ။ဒီ Team Viewer Software ကဘယ်လိုအသုံးဝင်လဲဆိ်ုတော့မိမိတို့
ဖြေ၇ှင်းပေးတဲ့နေ၇ာမှာသုံးဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်၇ဲ့ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့အခြားတစ်နေ၇ာမှာ၇ှိတဲ့ကွန်ပျူတာကို Control လုပ်ပြီးသုံးတဲ့သဘောပါပဲ။ပြီး၇င်သုံး၇တာလဲအဆင်ပြေပါတယ်။မသုံးဖူးတဲ့သူတွေအတွက်ဘယ်လိုအ
1.အ၇င်ဆုံး Portable လေးကို Run လိုက်ပါ။ပြီး၇င်မိမိဝင်ေ၇ာက်မဲ့တခြားစက်မှာလည်း Run လိုက်ပါ။
ေ၇ာက်မဲ့စက်မှာပေါ်နေတဲ့ ID နဲ့ Password ကိုတောင်းလိုက်ပါ။
Driver Genius Professional Retail Edition v10.0.0.526 (25112010) Portable
By နေမင်းမောင်10:57 PMSystem ToolsNo comments
ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ Windows တင်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ Driver တွေကိုရှာဖွေပေးနိုင်ပြီးအလွယ်တကူ Download ချ Install လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Driver Genius Portable လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ.။
လေးပါ။ကျွန်တော်တို့Windows တင်ပြီး Driver မစုံလို့ Audio Driver လိုတာတို့ ၊ Sound Driver တို့ကြုံလာပြီဆိုရင်အရမ်းဒုက္ခရောက်ပါတယ်။အခုတင်ပေးတဲ့ Software လေးကတော့တော်တော်
လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်။လိုအပ်တဲ့Driver တွေကိုအဆင်သင့် Install လုပ်လိုက်ယုံပါပဲ။ပြီးတော့ Portable ပါ။ကျွန်တော် Serial Keys တွေကိုလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်။လိုအပ်တဲ့သူများအောက်
By နေမင်းမောင်4:21 AMKnowledge and FAQ1 comment
ကျွန်တော်စီဘောက်မှာကိုမင်းသုခမေးထားတာလေးကိုတကယ်လို့တခြားသူငယ်ချင်းများလည်း Window နှစ်
1. အ၇င်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Windows နှစ်ခုတင်မယ်ဗျာ..။ဘာအတွက်တင်မှာလဲ.။ကိုယ့်အတွက်လိုအပ်ချက်
၇ှိလား..။တကယ်ေ၇ာလိုအပ်နေလားဆိုတာကိုတော့စဉ်စားဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ်ကလဲ Window7ကိုသုံးချင်
နဲ့ပါတ်သတ်ပြီးလုပ်၇မှာက Windows XP နဲ့သုံးမှအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေလောက်ပဲသုံးတာကောင်း
CDMA 800 MHz for Internet Setting + Dial-up Software
By နေမင်းမောင်8:24 PMMobile Software9 comments
ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အခုထွက်နေတဲ့ CDMA 800 MHz နဲ့အင်တာနက်သုံးဖို့အတွတ်ဘယ်လိုပြင်ကြမလဲဆို
မပေးနိုင်တာကိုတော့တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ...။CDMA 800 MHz နဲ့ပါတ်သတ်ပြီးတော့ကျွန်တော့၇ဲ့
လက်၇ှိအခြေအနေနဲ့ကလက်တွေ့ လေ့လာဖို့ခက်နေတဲ့အတွက်ပါ။ကျွန်တော်Dial-up ဆော့ဝဲလ်လေးကိုအကိုတစ်
အခုပို့ဒ်လေးကိုတော့ Ubuntu for Myanmar ကနေပြန်ပြီး၇ှယ်ပေးထားတာပါ။
လိုအပ်တာများ၇ှိ၇င် Comment ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်စေ....မေးသို့ဖြစ်စေတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...။
G-talk ကနေ Mail ဖွင့်တဲ့အခါ Mozilla Firefox နဲ့တိုက်ရိုက်ပွင့်အောင်
By နေမင်းမောင်6:50 PMGoogle Fun1 comment
By နေမင်းမောင်3:05 PMKnowledge and FAQ, Tips And Tricks12 comments
ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်သုံးတဲ့အခါ Connection နှေးပါတယ်ဆို၇င်ဘယ်ကြိုက်ပါ့မလဲနော်..။မြန်အောင်လုပ်
နဲ့လဲ၇ှင်းပြပေးထားပါတယ်..။ပုံလေးတွေကိုသေချာမမြင်၇ဘူးဆို၇င် Double Click နှိပ်ပြီးကြည့်လိုက်ပါနော်....။
1.အ၇င်ဆုံးအခုသုံးနေတဲ့ Connection ဘယ်လောက်၇ှိတယ်ဆိုတာကြည့်ထားလိုက်ပါ။Window + R ကိုနှိပ်
လိုက်ပါ။ပြီး၇င် Run Box ထဲမှာ ping google.com -t လို့၇ိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။ဒါဆို၇င်အောက်
Cowon JetAudio v7.1.0.3100 Plus VX
By နေမင်းမောင်12:25 PMMultiMedia1 comment
Click &amp;amp;amp;amp;lt;a href='http://www.cincopa.com/media-platform/view.aspx?fid=AQHAQjKaC726'&amp;amp;amp;amp;gt;here&amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;gt; to open the gallery.&amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;gt; Powered by Cincopa &amp;amp;amp;amp;lt;a href='http://www.cincopa.com/media-platform'&amp;amp;amp;amp;gt;Media Platform&amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;gt; for your website and Cincopa MediaSend for &amp;amp;amp;amp;lt;a href='http://www.cincopa.com/mediasend/start.aspx'&amp;amp;amp;amp;gt;file transfer&amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;gt;
Cowon JetAudio v7.1.0.3100 Plus VX ပါ။ကျွန်တော်လဲ Windows တင်ပြီးတည်းကကျွန်တော့်စက်မှာ Jetaudio ကိုတင်ဖို့မေ့နေတာ။မနေ့ကမှစက်မှာတင်၇င်းနဲ့တကယ်လို့လိုအပ်တဲ့သူတွေ၇ှိ၇င်လဲသုံးလို့၇
အောင်ကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အများစုကတော့ Jetaudio ကိုအသုံးများကြပါတယ်။ကိုယ့်
၇ဲ့စက်မှာတော့၇ှိထားသင့်ပါတယ်။Audio Mixing Recorder , Audio Trimmer , Video Converter ,
Video Format Converter to AVI စတဲ့ Function တော်တော်များများကိုလည်းအသုံးပြုလို့၇ပါသေးတယ်။
AVG Antivirus Internet Security 2011 Full Purchased Version + Serial
By နေမင်းမောင်12:11 PMAntivirus Softwares, Antivirus Tools, Audio Tools, Internet ToolsNo comments
Click &amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href='http://www.cincopa.com/media-platform/view.aspx?fid=AgIAbiKC_mi0'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;here&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; to open the gallery.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; Powered by Cincopa &amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href='http://www.cincopa.com/media-platform'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Media Platform&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; for your website and Cincopa MediaSend for &amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href='http://www.cincopa.com/mediasend/start.aspx'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;file transfer&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;
ကျွန်တော် AVG Antivirus Internet Security 2011 Full Purchased Version လေးကို Serial လေးနဲ့တင်ပေး
လိုက်ပါတယ်။ဒီကောင်လေးကတော်တော်အသုံဝင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ၇ှိတဲ့ Virus တွေ
Spyware တွေ၊ Spam တွေအပြင်အင်တာနက်ကတဆင့်ဝင်ေ၇ာက်နိုင်မှုတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။မိမိ
၇ဲ့ Mail မှတဆင့်ဝင်ေ၇ာက်လာနိုင်တဲ့ Virus များကိုဖယ်၇ှားပေးခြင်း ၊ ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ပေါ်မှာဆော့
၀ဲတွေကိုဒေါင်းလော့ချမယ်ဆို၇င် Virus ပါမပါစတဲ့အင်တာနက်ဆိုင်၇ာလုံခြုံမှုကိုလဲအာမခံချက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုချင်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်2Share နဲ့ iFile.it တို့ကနေတင်ပေးထားပါတယ်။
1.Series ထည့်တာကတော့လွယ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုစက်မှာ Install လုပ်ပြီးပြီဆို၇င် Help ကိုသွားပါ။ပြီး၇င် Active ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Internet Download Manager 6.05 Build 11 + Keygan
By နေမင်းမောင်5:44 AMInternet Download ManagerNo comments
Click &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href='http://www.cincopa.com/media-platform/view.aspx?fid=AAEAgi6y9KcV'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;here&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; to open the gallery.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; Powered by Cincopa &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href='http://www.cincopa.com/media-platform'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Media Platform&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; for your website and Cincopa MediaSend for &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href='http://www.cincopa.com/mediasend/start.aspx'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;file transfer&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;
IDM ကတော့ Update အသစ်ထပ်ထွက်ပြန်ပြီဗျာ။ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကမှ Full Version လေးတင်ပေးလိုက်သေး
တယ်။အခုInternet Download Manager 6.05 Build 11 တဲ့ဗျာ။Update တွေကလဲထွက်လို့ကိုမဆုံးနိုင်တော့ဘူး
ဗျာ။သူကထပ်ထွက်တော့လဲကျွန်တော်ထပ်၇ှာပြီး Keygan လေးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။တကယ်လို့ကိုယ်တင်
ထားတဲ့ IDM လေးကိုမဖြုတ်ချင်ဘူးဆိုလဲဆက်သုံးပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ။Update တောင်း၇င်တော့မပေးနဲ့ပေါ့ဗျာ။
Update ဖြစ်တာကိုမှသုံးချင်သူတွေကတော့ အောက်မှာသာဒေါင်းလော့ချလိုက်ပါ။ IDM ကိုတင်တဲ့အခါမှာအ
ဆင်မပြေတာလေးတွေတွေ့ နေ၇တယ်ဗျာ..။အ၇င်ဆုံး ဒီလင့်လေး ကအတိုင်းသေချာလုပ်ပေးပါ။တကယ်လို့
မ၇ှင်းသေးဘူးဆို၇င်ကျွန်တော်အောက်မှာ Video File လေးနဲ့လဲတင်ပေးထားပါတယ်။အဆင်မပြေတာများ၇ှိ
Google Reader ကိုအသုံးချကြည့်၇အောင်
By နေမင်းမောင်3:07 AMGoogle FunNo comments
ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ Google Reader လေး၇ဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးဖောက်သည်ချချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အ၇င်ကဆို၇င်ကိုဖတ်ချင်တဲ့ဆိုဒ်လေးတွေတွေ့ ၇င် Bookmark ထဲထည့်ပြီးမှတ်၇တာနဲ့ ပြီး၇င်
Firefox Browser တစ်ခုထဲမှာတင်ဖတ်ချင်တဲ့ဆိုဒ်တွေကိုအများကြီးဖွင့်ထား၇တာတွေနဲ့ကြုံဖူးပါတယ်။အခု
ကျွန်တော်တို့ Google Reader လေးနဲ့အလွယ်တကူအသုံးပြုလို့၇သွားပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ဖတ်ချင်တဲ့ဘလော့
လိပ်စာလေးတွေကို အောက်ကပုံလေးမှာပြထားသလို Addasupsrition မှာ Add လိုက်ယုံပါပဲ။
Processor Name ကိုပြောင်းချင်သူများအတွက်
By နေမင်းမောင်9:15 PMKnowledge and FAQNo comments
ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ၇ဲ့ Processor Name လေးကိုချိန်း
1.အ၇င်ဆုံး Windows + R ကိုနှိပ်ပြီး Run Box ထဲမှာ Regedit လို့၇ိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
2.ဒါဆို၇င် Registry Editor Box လေးကျလာပါလိမ့်မယ်။HKEY_LOCAL_MACHINE ကိုသွားပါ။
3.HKEY_LOCAL_MACHINE >> HARDWARE >> DESCRIPTION >> System >> CentralProcessor
>>0ေ၇ာက်တဲ့အထိအဆင့်ဆင့်သွားလိုက်ပါ။ပြီး၇င်ညာဘက်မှာ Processor Name ကို၇ှာပါ။
4.တွေ့ ပြီဆို၇င် Processor Name ကို Right Click နှိပ်လိုက်ပါ။ပြီး၇င် Rename ကိုနှိပ်ပြီး ကြိုက်တဲ့နာမည်တစ်ခုကို
5.ပြီး၇င် My Computer ကို Right Click နှိပ်ပြီး Properties ကိုသွားလိုက်ပါ။ပြီး၇င် System အောက်က
Processor ကိုကြည့်လိုက်ပါ။ဒါဆို၇င်ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျုတာ၇ဲ့ Processor Name ပြောင်းသွားတာ
By နေမင်းမောင်6:29 PMKnowledge and FAQ, Tips And Tricks10 comments
ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ Application Software တွေကို Portable လေးတွေနဲ့ USB Drive ထဲထည့်ပြီး
ယူသွားချင်သူများအတွက်ကိုလိုချင်တဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးတွေကို Portable ပြုလုပ်နည်းလေးနဲ့အသုံးပြု
၇မဲ့ဆော့ဝဲလေးကိုပြန်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းလေးကိုသိခွင့်၇တဲ့အတွက် Catman ကို
1.အ၇င်ဆုံးကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ VMware-ThinApp-Enterprise-4.6.0-287958-1 ဆော့ဝဲလ်လေးကိုအ၇င်
2.ပြီး၇င်ကျွန်တော်တို့စက်မှာ Run လိုက်ပါ။ သူက License Key တောင်းပါလိမ့်မယ်။ဘာမှမပူပါနဲ့ကျွန်တော်အ
ဆင်သင့်သုံးလို့၇အောင်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ထည့်ပြီးပြီဆို၇င် ဒီကောင်လေးကိုဆက်ပြီး Install လုပ်လိုက်
3.ဒီကောင်လေးကို Install လုပ်ပြီးသွားပြီဆို၇င်တော့ကျွန်တော်တို့ လုပ်ချင်တဲ့ Portable လေးကိုစပြီးဖန်တီးလို့
၇ပါပြီ။ကျွန်တော်ကတော့ Google Chrome ကိုလုပ်ပြပေးထားပါတယ်။
4.အ၇င်ဆုံး Start >> All Program >> V Mware ထဲကနေ ThinApp Setup Capture ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
By နေမင်းမောင်11:17 PMKnowledge and FAQNo comments
အသံဖိုင်ကိုလဲ အမျိုးသားအသံနဲ့ အမျိုးသမီးအသံနှစ်မျိုးနားထောင်လို့၇ပါတယ်။MP3ဖိုင်လေးကိုလိုချင်တယ်
ဆို၇င်တော့ Download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးယူလိုက်ယုံပါပဲ။လိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့အ၇မ်းအသုံးတဲ့
Forder Icon လေးတွေကိုမိမိတို့ပုံလေးတွေနဲ့ထားကြည့်၇အောင်
By နေမင်းမောင်8:01 PMKnowledge and FAQ, Tips And Tricks1 comment
ဒါကတော့ကျွန်တော့် Destop ပေါ်မှာ၇ှိတဲ့ Icon လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံလေးတွေပြောင်းပြီးထား
1.အ၇င်ဆုံး Start ကိုနှိပ်ပြီး Search Programs and Files ဆိုတဲ့ဘောက်လေးထဲမှာ Paint ကို၇ိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။Start ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့လဲ Paint ဆိုတာလေးကိုတွေ့ ပါလိမ့်မယ်။Paint ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
2.Paint ပေါ်လာ၇င် Open ကနေမိမိတို့ကြိုက်တဲ့ ပုံလေးကိုေ၇ွးလိုက်ပါ။Ctrl + O ကိုနှိပ်လိုက်၇င်လဲ၇ပါတယ်။
3.ဓာတ်ပုံပေါ်လာ၇င် Save as မှာ BMP နဲ့ Save လိုက်ပါ။Save as box ပေါ်လာ၇င် file name ကိုေ၇ှ့ကမိမိတို့
4.ပြီး၇င်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တဲ့ Forder Icon လေးကို Right Click ထောက်ပါ။ပြီး၇င် Properties ကိုနှိပ်
5.Browser ထဲကနေပြီးကျွန်တော်တို့ခုနက Save ထားတဲ့ပုံလေးကိုေ၇ွးလိုက်ပါ။ပြီး၇င် OK ။ Apply ။ OK
ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆို၇င် Forder Icon လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံလေးနဲ့ထားလို့၇သွားပါပြီ။
Eset Nod32 Antivirus 4.0 ( 64-Bit ) and ( 32-bit )...
Download လုပ်နည်းများ ( Megaupload,Fileserve,i...
Blog မှာဘာကုဒ်မှထည့်စ၇ာမလိုပဲ Readmore လေးထည့်ကြည်...
ဘလော့မှာ Counter Widgets လေးတွေထည့်ချင်သူများအတွက်...
Xilisoft HD Video Converter 6.5.1.0120 - Portable ...
ဘလော့မှာ Zawgyi-One နဲ့ Unicode ကိုအလွယ်တကူပြောင်း...
Control panel လေးကို Destop ပေါ်မှာပဲအလွယ်လေးထာြး...
Driver Genius Professional Retail Edition v10.0.0....
CDMA 800 MHz for Internet Setting + Dial-up Softw...
AVG Antivirus Internet Security 2011 Full Purchase...
Forder Icon လေးတွေကိုမိမိတို့ပုံလေးတွေနဲ့ထားကြည့်၇...
Nokia Collection [76 Applications - 31Games - 100 ...
MiniTool Power Data Recovery 6.5.0.1 Software + Ke...
Babylon Pro 9.0.1.5 + Patch
Internet Download Manager 6.05 Build 10 Final + Ke...